Xildhibaanada labada aqal ee Baarlamaanka Soomaaliya oo Mowqif cad kasoo saaray Khilaafka Galmudug | SAHAN ONLINE
Xildhibaanada labada aqal ee Baarlamaanka Soomaaliya oo Mowqif cad kasoo saaray Khilaafka Galmudug
MUQDISHO – Xildhibaanada labada aqal ee Baarlamaanka Federaalka ee laga soo doorto Maamulka Galmudug ayaa mowqif cad kasoo saaray khilaafka xilligan ka dhex taagan maamulkaas.
Xildhibaanada ayaa soo saaray Warsaxaafadeed ka kooban saddex bog oo ku saxiixan yihiin aqlabiyada Xildhibaanada iyo Senetarada.
Warsaxaafadeedka ayaa lagu sheegay in Xildhibaanada ay la kulmeen Madaxweyne Xaaf, Madaxweyne kuxigeenka Maxamed Xaashi Carabey, Guddoomiyaha Baarlamaanka Cali Gacal Casir iyo beelaha cabashada qabay.
Xildhibaanada ayaa si cad u sheegay in qaabka loo hirgeliyay heshiiskii Jabuuti aanu aheyn si waafaqsan qodobadii heshiiskaas ku xusnaa, gaar ahaan qaabka la isugu daray labada Baarlamaan oo aan isku dheeli tirneyn iyo in aan la tixgelin awood qeybsigii beelaha reer Galmudug ku heshiiyeen.
Warsaxaafadeedka ayay sidoo kalr ku sheegeen in Dastuur cusub lagu bedelay kii Galmudug, kaasoo si gaar ah loogu tixgeliyay dhinac ka mid ah dhinacyadii heshiiska galay, laguna qoray qodobo ka hor imaanaya dastuurka qaranka, isla markaana aan ka turjumeyn maslaxada beelihii wada dhistay Galmudug.